Waalidiinta ardayda dhigata dugsiga Bridge oo ka carooday hadal uu jeediyay xoghayaha ururka KNUT – The Voice of Northeastern Kenya
Waalidiinta ardayda dhigata dugsiga Bridge oo ka carooday hadal uu jeediyay xoghayaha ururka KNUT
Star FM December 16, 2016
Qaar ka mid ah waalidiinta ardayda dhigata dugsiyada caalamiga ah ee Bridge ayaa ka carooday hadal uu jeediyay xoghayaha guud ee ururka macalimiinta ee KNUT Wilson Sossion oo ku aadana tayada waxbarasho ee dugsiyadaasi. Waalidiinta ayaa xusay in hadalka Mr.Sossion oo ahaa in tayada waxbarasho ee dugsigaasi ay saameyn dhanka maskaxda ah ku yeelatay macalimiinta, ardayda iyo sido kale waalidiinta.
Sido kale barayaasha iyo waalidiinta ay caruurtoodu wax ka bartaan dugsigan aya doonayo in ay la kulmaan wasiirka waxbarshada Sido kale barayaasha iyo waalidiinta ar caruurtoodu wax ka bartaan dugsigan aya doonayo in ay la kulmaan wasiirka waxbarshada Dr.Fred Matiangi si ay uga wada hadlaan tayada waxbarasho ee dugsiga Bridge.
Dhanka kale maamulka dugsigan oo xarmo badan ku leh dalka ayaa guda galay in ay diiwangeliyaan dhamaan 405-ta xarumood oo ay leeyihiin si loogu hogaansamo shruucda ay dhawaan soo saaraty dowlada.
Ms Celestine Tabu oo xubin ka ah gudiga ay ku bahobeen barayaasha iyo waalidiinta ardayada dugsigan ayaa sheegtay in 8 sano oo ay dalka ka howlgalayeen ay muujiyeen in xitaa dhaqaalo yar ay u adeegsan karaan waxqabadkooda.
Waxay hada ku dalbanayaan in xoghayaha KNUT Mr.Wilson Sossion uu ka noqdo hadalka ku ku tilmaamay in dugsigaasi alabaabada laisugu dhufan karo.
← Madaxweynaha dalka oo maanta booqanayo countiga Busia
Dowlada dalka DRC oo amar ku bixisay in xayirad la saaro isticmaalka baraha bulshada →